Ntuziaka Semalt Iji profaịlụ nzacha nke nchịkọta Google
Nyochaa nchịkọta weebụ site na iji ngalaba bụ ụzọ kachasị mma iji ghọta ya. Nchịkọta Google na-enye ọdịiche omenala, nzacha profaịlụ, na ngalaba dị elu n'etiti ụzọ ndị kasịsị ike isi nweta data. N'isiokwu na-esonụ, Oliver King, onye Semalt Onye Ahịa Gbasara Onye Na - ahụ Maka Nlekọta, ga - atụle nzacha profaịlụ.
Ọ bụ usoro atụmatụ nke ogologo oge, onye enweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ hichapụ ya. Ndị ọkachamara na-enye ndị ọrụ ndụmọdụ na ha nwere profaịlụ data data, nke ha nwere ike iji maka ndabere ma ọ bụrụ na ihe na-ezighị ezi na usoro ahụ - tennis court construction companies pa. Nchịkọta Google Analytics Change History na-enyere aka na mgbanwe ndị emere na nzacha profaịlụ. Ndị nzacha nzacha ugbu a na-etinye aka na akụkọ oge, nke dị mkpa iji nwalee nzacha ọhụrụ. Lelee ihe profaịlụ ohuru wee mezie ihe ọ bụla mebiri n'oge.
Nchịkọta Ntọala Google Analytics iri
1. Tinye Adreesị IP
Ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma isi nwalee ihe mgbaru ọsọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ, enwere ohere na ndị ọzọ nwere otu adreesị ahụ. N'okpuru nchịkọta nchịkọta Google Analytics, mepụta otu ọhụrụ, nye ya aha, ma lelee igbe ahụ na nhazi nhazi. Họrọ ịnye okporo ụzọ nanị site na adreesị IP ndị dabara adaba na njirimara nke IP gị ugbu a.
2. Wepu Adreesị IP
Ọ dịkwa mkpa ịtọlite ​​profaịlụ nke na-ewepụ ọrụ nke ụlọ ọrụ na nke ndị ọzọ mara. Ihe kpatara nke a bụ na ndị nleta a nwere echiche na omume dị njọ nke dị iche na nke "onye nleta" nke ndị nwe ụlọ na-ebuli saịtị ha. N'okpuru ozi ntanetị, họrọ nhazi nhazi, ma lelee igbe ndenye. Ebe nhazi ahụ kwesịrị ịgụ adreesị IP, wee gaa n'ihu ịtinye ụkpụrụ nhazi ahụ. Enweghi ncheta maka nza a. Ị nwere ike nyochapụ ọtụtụ adreesị site na iji ọrụ ntanetịime IP.
3. Gụnye / Wepu Okwu Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ nnukwu CPC ma achọghị ka otu n'ime ụlọ ọrụ ị na-arụ ọrụ iji nweta ozi a, nchịkọta ahụ nwere ike inyere aka wepụ data CPC site na profaịlụ ha..N'okpuru ozi nhazi ahụ, nye nyo aha ọhụrụ dị ka "wepu ndị ọbịa CPC" ma nye ya akara nchịkọta omenala. Lelee igbe wepu ma họrọ "Mgbasa Mgbasa Ozi" na nza nza. Ụdị nhazi bụ CPC, ọ bụghịkwa ikpe mara.
4. Ndabere na Ihe Mgbasa Ozi
Ụlọ ọrụ buru ibu bụ, ọnụ ọgụgụ dị elu nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi. Nke mbụ, ọ dị mkpa ịgbaso ụkpụrụ nduzi siri ike banyere otu mmadụ kwesịrị isi kpọọ aha ha. Iji merie nsogbu a, gbakwunye ihe ntanetị ise dị ala na mpaghara mgbasa ozi UTM. Ndị a gụnyere mgbasa ozi mgbasa ozi, isi iyi, ọdịnaya, okwu, na aha. Họrọ aha ohuru dika "Lowercase on Attributes Advertising." N'okpuru nhazi ntanetị, họta "obere ala," wee banye "Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi" dịka nza nchara. Ọ na-enye aka wepụ data maka nchịkọta nchịkọta dị mfe na Google Analytics ebe ọ bụ na ọ na-eme ka nyocha ọ bụla nyocha.
5. Ndabere na rịọ URI
URL nwere ike iwe ma mkpụrụedemede ukwu na mkpụrụedemede ukwu na-apụta na sava weebụ adịghị arụ redirect. Ugboro abụọ yiri nke a, na iche iche aha, nwere ike idekọ ya dị ka echiche abụọ dị iche iche ma na-eduga na ọdịnaya ahụ dịka / banyere-Anyị / na / banyere-anyị /. Iji dozie nsogbu a, mepụta nhazi ọhụrụ ma nye aha "Lowercase on Request URI." Ọ bụ nchịkọta omenala na nlele igbe dị ala. Ebe nhazi ahụ kwesịrị ịgụ "rịọ URI."
6. Gbakwunye aha njirimara iji rịọ URI
Ọ bụrụ na Google na-agba ọsọ na mmejuputa multidomain na data niile maka ngalaba abụọ na-anakọta n'otu profaịlụ, ịmata ọdịiche dị n'etiti aha abụọ ahụ nwere ike ọ gaghị adị mfe. Itinye akụkụ nke abụọ ma ọ bụ aha nnabata ga-enyere aka dozie nsogbu ahụ. Nye ncha aha dị ka "Tinye aha njirimara iji rịọ URI" ma mee ya omenala. Lelee igbe "Di elu". Ubi A Iji Wepụ A kwesịrị ịbụ aha njirimara, mgbe Field B iji wepụ B kwesịrị ịbụ "rịọ URI." "Nrụpụta" - Onye na-ewu ihe kwesịrị ịbụ "rịọ URI." A choro ubi niile na mpaghara ubi B, ma ghara ịbụ nke nwere nsogbu.
7. Gụnye Mpaghara (s) kpọmkwem
E nwere oge mgbe otu onye na-aga ebe nrụọrụ weebụ na-adọrọ mmasị na ụwa ma nwee ike ịchọta ụfọdụ mpaghara. Jiri ntinye na-esonụ: Mepụta nhazi ọhụụ ọhụrụ ma kpọọ ya, kwuo "Gụnye | Dọọ | Grik" ma họrọ itinye..Mpaghara nchịkọta kwesịrị ịbụ "Mba" na ntinye nhazi "Netherlands> Belgique | Germany" na ekwesịghị ịbụ ihe gbasara nsogbu.
8. Gụnye Naanị Ndị Nledo Na - eleta
Ụlọ ọrụ kwesịrị iji nke a ma ọ bụrụ na ha chọrọ ilebakwu anya na arụmọrụ nke ndị na-eme njem na mobile. Ntụziaka a na-atụ aro bụ "Gụnye Mobile" ma kwesiri ịbụ nchịkọta omenala. Lelee igbe na-agụnye ma họrọ "Mobile?" na nhazi nhazi. Họta "Ee" na ntinye nyocha na "ọhụụ" na ụbụrụ.
9. Gụnye naanị okporo ụzọ ka ederede aha
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-agụnye ngalaba blog ma nwee ederede ọdịnaya na-agbakwunye ya posts, e nwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji mee ka ohere ha banye na ndekọ ahụ dị mfe. Iji mee nke a, mepụta nhazi a kọọrọ ya na "Gụnye okporo ụzọ okporo ụzọ". Gụnye naanị okporo ụzọ ahụ na ntinye akwụkwọ nke na - amalite site na "/ blog / dị ka folda akwụkwọ.
10. Gụnye naanị okporo ụzọ ka ederede aha
Ọ na-enyere aka igbochi ndị ọzọ ịnweta nọmba profaịlụ Google Analytics ma tinye ya na mpaghara ndị ọzọ. Ọ na-ehichapụkwa ngalaba nyocha ma ọ bụ nyocha nke nwere nọmba profaịlụ na-agba ọsọ. Dee "nchịkọta Ihe Nlereanya" ma họrọ gụnyere. O kwesịrị inwe nhazi "Hostname" na "exampledomain \_ .com" dị ka ihe ntanetị. Ọ bụghị ikpe mara.
11. Bonus: Wepu All Query Sriles
Ọ ga-abụkwa ihe dị mkpa iji nyochaa nyocha njirimara ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a nwere ọtụtụ n'ime ha. Ọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ibe ndị na-egosi na GA, si otú a na-enye ya ihe ọ pụtara. Jiri "wepu ihe njuju ojuju nile" dika aha maka nzacha omenala. Lelee igbe "Di elu". Ubi Iji wepụ A kwesịrị ịrịọ URI, ma hapụ Ubi B iji wepụ B blank. "Nrụpụta" - Onye na-ewu ihe kwesịrị ịbụ "rịọ URI." A choro ubi niile na mpaghara ubi B, ma ghara ịbụ nke nwere nsogbu.
Inye nhazi nhazi
Ntinye nke nchịkọta nchịkọta Google Analytics dị n'ụzọ onye ọrụ si agbakwunye ha. O kwere omume igbanwe ha na ntọala profaịlụ na nchịkwa nchịkwa